eBook file size: 80.5 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၈၅ ခုနှဈ၊ ဖဖေျေါဝါရီလ၊ အမှတျ-၂ ထုတျ ကလြာအမြိုးသမီးမဂ်ဂဇငျးတှငျ ပါသော ဆောငျးပါး ဖွဈပါသညျ။ Download -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
2. ပငျးတယနယျ​​မွေ နှငျ့ ရှဥေမငျဘုရားသမိုငျး - သီလဝ ပွုစုသညျ
... - ရေနံမြေစန်းတင့် စေတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ( စေတိယပုစ္ဆာဝိဿဇ္ဇနာကျမ်း) - မင်းကွန်းဓမ္မစေတီဆရာတော် ဦးနာဂိန္ဒာလင်္ကာရ တံတားဦးတည် မင်္ဂလာစေတီမော်ကွန်း - တိုးတက်ရေးဦးသန်းဖေ သဲပုံစေတီပွဲ - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ) ...
3. သမိုငျးဝငျ မိုးဗွဲမှတေျောဓာတျစဈ ဘုရားသမိုငျး
4. ဓမ္မပူဇာ - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 60.4 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အတွဲ(၁၄)၊ အမှတ်(၉)ထုတ် ရတနာမွန်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
5. ၁၉၁၈ ခုနှစ် ပညာရေးကဏ္ဍတစ်ရပ် - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 105 KB ebook pages:7Publication: ၁၉၇၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ အမှတ်(၃၂)ထုတ် စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
6. မန္တလေး မြေမြို့ရိုးကြီး - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
7. မြင်းဖြူရှင် - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 105 KB ebook pages:7Publication: အမှတ်(၉)၊ ၁၉၈၅-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် ကလျာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
8. ဘိန္နကရာဇာမင်း၏အနွယ်တော်များ - ဦးဝင်းမောင်(တမ္ပ၀တီ)
... နှင့် သုတေသနပညာရှင် ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်တင် (မဟာဝိဇ္ဇာ)၏ အမှတ်တရ (၈၅)နှစ်မွေးနေ့ မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွင် ဦးဝင်းမောင်(တမ္ပ၀တီ) ဖတ်ကြားသည့် သုတေသနစာတမ်း ဖြစ်ပါသည်။ (ဤစာတမ်းကို ကိုဝင်းသူရညွန့်(ရန်ကုန်)မှ အီးမေးလ်ဖြင့် ...
9. ဦးတိုး၏စိမ့်ကြီးမြိုင်ကြီး - ဦးမောင်မောင်တင် (မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 107 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ အမှတ်(၇၅)ထုတ် ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ Download -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
10. သဲပုံစေတီပွဲ - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 73.5 KB ebook pages: 8 Publication: ၁၉၈၃-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ်၊ ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
11. တူရိယာသင်္ကေတနှင့်မြို့မ - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 55.2 KB ebook pages:2Publication: ၁၉၇၆-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် စန္ဒာရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
12. ကမ္ပည်း - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 190 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၈၃-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလထုတ် စာပေလုပ်သားမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသောဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
13. ရှဆေငျက - ဦးမောငျမောငျတငျ(မဟာ​ဝိဇ်ဇာ)
eBook file size: 197 KB ebook pages:4Publication: ၁၉၇၅ ခု၊ ဒီဇငျဘာလ၊ ရှုမဝမဂ်ဂဇငျး။ Download Related Articles ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
14. ဦးကြင်ဥ၏တေဇသူရိန်ပြဇာတ် - ဦးမောင်မောင်တင် (မန်းတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 37.9 KB ebook pages:6Publication: ၁၉၅၈-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
15. မြန်မာစာတက္ကသိုလ် - ဦးမောင်မောင်တင် (မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 166 KB ebook pages: 35 Publication: အလင်းရောင်စာပေ၊ နယူးပုံနှိပ်တိုက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ download -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
16. သံပေါက်စာများ - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 78.2 KB ebook pages:2Publication: ၁၉၇၉-၈၀-ခုနှစ်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကောလိပ်ထုတ် နှစ်လယ်မဂ္ဂဇင်း၌လာသော ဆောင်းပါး။ download
17. မြန်မာစာတက္ကသိုလ် - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 166 KB ebook pages: 35 download
18. မြန်မာမင်းလက်ထက်တော် စာတမ်းများ - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)
eBook file size: 277 KB ebook pages: 85 ပုံနှိပ်ခြင်း - ပထမအကြိမ်၊ ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ ကုမာရပုံနှိပ်တိုက်၊ ပုဂံစာအုပ်တိုက်၊ ကန်တော်လေး၊ ရန်ကုန်မြို့။ download -Related Articles- ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...